Fahazarana mamela hanatanjaka ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 02/05/2022 22:13 | fifandraisana
Tena zava-dehibe sy ilaina ny fahazarana rehefa manamafy ny fifandraisana rehetra. Amin'ireo fahazarana ireo dia afaka mahafantatra tsara ny mpivady ianao ary ataovy traikefa mampanankarena amin'ny lafiny rehetra izany. Ny fahazarana dia manampy ny mpivady ho matanjaka kokoa ary ny fitiavana dia eo foana.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hanondro andiana fahazarana izay hamela manamafy ny fitiavana efa misy ao anatin’ny fifandraisana iray.
1 Miaraha matory
2 maneho fitiavana
3 matokia ny mpiara-miasa
4 mitantana tanana
5 miaraka mandro
Ny gadona eo amin’ny fiainana amin’izao fotoana izao no mahatonga ny mpivady maro tsy hifanojo rehefa matory. Ara-dalàna raha matory adiny iray ny antoko iray ary mijanona irery ny iray, na mijery tele, milalao console na mamaky boky. Tsy tsara io fahazarana io rehefa misy faniriana sy firaisana ao amin'ny mpivady. Ny torimaso miaraka amin'ny mpivady dia manampy amin'ny fitazonana ny faniriana ara-nofo ho velona kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny zavatra tsotra toy ny famihina ny namanao dia afaka manova ny tontolo pesimistika ao anatin'ny mpivady. ho an'ny iray hafa feno angovo sy positivisme. Tsy misy maharatsy ny mitady ny olon-tianao mandritra ny tontolo andro ary manaitra azy ireo amin'ny fanehoana firaiketam-po toy ny fihina mafy.
matokia ny mpiara-miasa
Tsy maintsy misy ny fifampitokisana amin'ny fifandraisana rehetra mba hiasa tsara. Tsy misy ilàna azy ny miaraka amin'ny olona tsy azonao itokisana. Ny fahatokiana tanteraka ny olon-tiana dia hamela ny fatorana noforonina hihamatanjaka kokoa. Toy ny fitokisana, tena zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hamela ny olon-tianao sy hanadino tanteraka ny avonavona.
Betsaka ny mpivady mandeha eny an-dalambe nefa tsy mifanome tanana ary manao halavirana toy ny mpinamana tsotra. Ny fifampikasihan-tanana dia famantarana fa velona kokoa noho ny hatramin’izay ny fitiavana ary misy izany fahasambarana izany ao anatin'izany fifandraisana izany. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny fahafahana mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ny namanao, mahatsapa fifankatiavana lehibe.
Marina fa fotoana akaiky ho an'ny olona maro ny fandroana. Na izany aza, afaka mizara ny douche amin'ny namanao mahatonga ny tombony ara-nofo ho zava-dehibe raha oharina amin'ny fifandraisana akaiky. Ny fandroana miaraka amin'ny namanao dia mamela anao hisokatra amin'ny hafa ary hiala amin'ny saro-kenatra. Tsy misy zavatra mamoafady kokoa noho ny fahatsapana ny hoditry ny namanao eo ambanin'ny rano fandroana.
Raha fintinina dia ireto no sasany amin'ireo fahazarana izay ahafahanao manamafy ny fifamatorana noforonina amin'ny namanao ary mamporisika ny fahasambarana ao anatiny. Zava-dehibe ny fampiharana ny fahazarana toy izany satria raha tsy izany dia mety hiharatsy ny fifandraisana na ny fifamatorana, miaraka amin'ny ratsy rehetra mety hitranga amin'ny mpivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Fahazarana mampahery ny mpivady
Ny fanalahidy handravaka ny efitra fandraisam-bahiny amin`ny tora-pasika fomba